Ntuziaka Blog-Post: Akwụkwọ Nkwado Onwe Onye | Martech Zone
Monday, July 9, 2007 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
My ọzọ tippee bụ Ryan onye na-agba ọsọ entrepreneurial blog, akpọ Akwụkwọ Nkwado Onwe Onye. Akwụkwọ Nkwado Onwe Onye bụ blog banyere otu esi enweta ego na azụmaahịa ụlọ ụlọ n'ịntanetị na echiche ndị ọzọ metụtara ya. (Akpachapụrụ m ahịrịokwu ikpeazụ a na Banyere peeji nke.)
Doh! Enwere m spam spam? Mgbe mbụ m chọpụtara na ngalaba aha ya na ndị niile hyphens, nke ahụ bụ nke mbụ echiche kụrụ m. Mgbe m wulitere akwara iji pịa-ahụ, achọtara m ebe nrụọrụ ezi uche dị na ya. Otú ọ dị, enwere m nchegbu.
I nwere ike iji nlezianya tụlee ịchọta ngalaba aha ọhụrụ. Nke ahụ kwuru - ọ dịghị mkpa ida ọkwa ọ bụla ị nwere ugbu a. Naanị ịmalite ịkwụsị ngalaba a ma jiri nke ọhụrụ maka saịtị gị. Nke a bụ echiche m niile, n'ezie!
E nwere ihe funky-aga na gị ịke mpempe akwụkwọ. A hapụrụ ụkwụ ka a kwekọọ yana etiti (ọdịnaya) div anaghị agba ogologo peeji ahụ na n'okpuru. Ana m eche, mana echere m na ị nwere ike ịnwe akara mmechi mmebi iwu (> / div>) na ibe gị. Akwụkwọ ndị ọzọ yiri ka ha na-enye n'ụzọ ziri ezi.
Nke a bụ ezigbo ihe… ị ma na Search Enjini adịghị iri ari niile ọdịnaya na ibe weebụ? Ha na-ewepu ọdịnaya site na elu nke peeji ahụ iji chọpụta Keywords ma depụta ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Y’oburu n’inwe inweta ihe omuma ka ichoputa igwe nyocha gi, di n’aka na itughari n’elu peeji a. Na nhazi gị, ị na-etinyeba n'akụkụ abụọ n'akụkụ ọdịnaya gị! Na-emebighị isiokwu gị ma ọlị, ị ga-enwe ike ibugharị ọdịnaya div n'elu sidebars wee bido ịkọwapụta ọdịnaya ahụ nke ọma.
'Ve rụọla ọmarịcha ọrụ iji chọpụta adreesị ndepụta gị na sidebar gị mana achọtara m goof nke nwere ike imerụ gị ahụ! N'ime nkụnye eji isi mee gị, e nwere usoro njikọ ndị ọzọ na-egosi ndepụta RSS gị. Nchọgharị na-eji nke a ọzọ njikọ gosipụta “RSS” bọtịnụ na ha ka ị denye aha na mfe. Nsogbu bụ na njikọta ọzọ bụ adreesị nri gị bụ isi (enwerekwa njikọ nke a na akụkụ aka ekpe gị ihe dị ka ọkara ụzọ). Nwere ike ịnwe ọtụtụ ndị ọzọ debanyere aha na saịtị gị karịa ka ị chere n'ihi na anaghị atụ ha Feedpress.
Iji dozie nkụnye eji isi mee, chọta usoro atọ a:
Ma jiri nke a dochie ya:
Naanị m ga-ehichapụ njikọ njikọ na akụkụ aka ekpe ebe ndị folks ga-ahụ ya na akara ngosi ma ọ bụ site na ihe nchọgharị ahụ.
Isi okwu bụ ndị na - ejide uche - ọbụghị naanị maka ndị na - agụ ya kamakwa maka Englọ Ọrụ Nchọgharị. Isi okwu nke posts gị bụ h3 mgbe isi nke ngalaba gị dị h2. Enwere ezigbo ohere na Englọ Ọrụ Nchọgharị na-ebuli gị elu maka okwu ahụ -adịbeghị anya Comments karịa Jiri Ego Mgbasa Ozi Gburugburu Mee Ego. Ikwesiri igbanwe mpempe akwụkwọ gi na isi okwu gi iji dozie nsogbu ndi a.
Fib na-fibbing m site n'itinye ihe njikọ elu na-ekwu, "Kpọtụrụ M". Mgbe m pịrị na nke ahụ, a kpọtara m na peeji nke ebe m na-enweghị ike ịkpọtụrụ gị! Doh! Echere m na ụdị kọntaktị ga-adị mma na ibe ahụ!
Biko gbasosie oru a ike ma hu na igu nke ozo Ndenye ederede maka PGA Auctions, karịsịa banyere robots.txt na sitemap.xml. Ekwenyere m na ị nwere ike ime ka ọnụnọ weebụ gị dịkwuo elu ma ọnụnọ njin ọchụchọ yana ndụmọdụ dị na post ahụ!
Nke ahụ kwesịrị ị na-arụsi ọrụ ike nwa oge! Daalụ maka ịhapụ m lelee blog gị! Echeghị m na ọtụtụ ndị mmadụ na-amata ụdị mmetụta na nhazi ya nwere ike igwu na njikarịcha Ngini Nchọgharị. Ọ na-arụ ọrụ na saịtị m ntakịrị ka m wee nyefee ndụmọdụ ndị mmadụ kụziiri m!
Tags: atọm 0.3ntinye ederede blogadreesị ndepụtankụnye eji isi meeRSSNSB 0.92NSB 2rss njikọ